नसक्नेलाई घरैसम्म ग्यास ! तर ‘झुक्याउने’ फोन बढी - Mitho Khabar
April 1, 2020 mithokhabarLeaveaComment on नसक्नेलाई घरैसम्म ग्यास ! तर ‘झुक्याउने’ फोन बढी
काठमाडौं । लकडाउनका कारण आपूर्ति असहज बनेको बेला नेपाल आयल निगमले भने आवश्यक परेकालाई घुम्ती सेवामार्फत् ग्यास उपलब्ध गराउन थालेको छ ।
निगमका कर्मचारीको सक्रियतामा राजधानीको टेकुमा ग्यास सिलिन्डर भण्डारण कक्ष खालेर सोही स्थान र दुईवटा मोबाइल भ्यानमार्फत् ग्यास उपलब्ध गराइन्छ ।
घुम्ती सेवामार्फत् ग्यास बिक्री गर्दाको पहिलो दिन मंगलबार निगमलाई माग धान्न हम्मेहम्मे पर्‍यो । दिनभर जम्मा ८७ सिलिन्डरमात्र बेचियो । तर, माग भने सयौंको सख्यांमा आयो ।
निगमले विविभन्न १२ वर्गका उपभोक्तालाई वितरण गरिने भनिएको भए पनि माग भने सक्नेहरुले समेत गरे । कतिले घरमा ग्यास हुँदा हुँदै पनि फोन गरे, कतिले ग्यास बुक गरेर डेलिभरीको समयमा फोन उठाएनन् । जसकारण आवश्यकतामा परेका सबैलाई ग्यास उपलब्ध गराउन नसकिएको निगमले जनाएको छ ।
घुम्ती सेवाले चोकचोकसम्म ग्यास पुर्‍यायो । चोकसम्म आउन नसक्नेलाई घरैमा उपलब्ध गराएको निगमले जानकारी दिएको छ ।
निगमले बजारमा ग्यासको अभाव नभएर डिस्ट्रिब्युसनमा समस्या रहेको दाबी गरेको छ ।
घुम्ती सेवामा खटिएका कर्मचारीको अनुभव
घुम्ती सेवामा खटिएका निगमका दुई कर्मचारीको अनुभव यस्तो छ । निगम कर्मचारी गोपालचन्द्र राई भन्छन्, “बत्तीसपुलतीमा एक मगर दम्पती ग्यास नपाएर छट्पटिएका रहेछन् । लकडाउनले घरबाट बाहिर निस्किन नपाएपछि उनीहरुलाई पकाएर खाने केही रहेनछ ।”
उनका अनुसार आगो बालेर दाल चामल उमालेर खानै नपाएका रहेछन् उनीहरु ।
राईले भने, “ग्यास नै किन्न समस्या पर्ने परिवार थियो । सम्पन्नले झैं इन्डक्सन किन्ने त कुरै भएन ।”
राईका अनुसार छिमेकीले निगमले उपलब्ध गराएको नम्बरमा फोन गरिदिएपछि बत्तीसपुतलीसम्म उनीहरुलाई ग्यास उपलब्ध गराइएको थियो ।
उनले थपे, “मलाई अंगालो हालेर रोए । मैले सोचेँ कि राम्रै काम गर्दै रहेछु ।”
अर्का कर्मचारी विकास बखतीले पनि यस्तै अनुभव सुनाए । उनले रिङरोडबाट नजिकका चोकमा ग्यास पुर्‍याइदिने भने पनि नैकापसम्म पनि ल्याइयो । कारण थियो, फरक क्षमताको परिवार । बखतीले भने, “आमा फरक क्षमताको हुनुहुन्थ्यो, छोरी सानै । उहाँहरुसँग मोबाइल पनि थिएन ।”
बखतीले पनि छिमेकीले फोन गरिदिएको आधारमा ग्यास पुर्‍याइएको राईकै जस्तो अनुभव सुनाए । मंगलबारको कामबाट जोसँग एउटामात्र सिलन्डर छ त्यसलाई बढी समस्या भएको पाइएको अनुभव उनीहरुले सुनाए ।
साँच्चै ग्यास नपाएर समस्या भोगकाले धेरै राहत दिएको दाबी उनीहरुले गरे । मंगलबार निगमले ६–७ परिवारलाई होम डेलिभरी गरिदियो । अरुले नजिकको चोकसम्म लिन गए । निगमको दाबी छ, “मुल लक्ष्य, जसको चुलो बल्दैन उसलाई राहत महसुस गराउने छ ।”
समस्या पर्नेभन्दा ठट्टा गर्ने बढी ! तीनतल्ला माथिसम्म ल्याइदिन माग
दिनभर निगममा १५ सयको हाराहारीमा फोन आएको राईले सुनाए । त्यसरी आएका फोनलाई निगमले अत्यावश्यक पहिचान गरेर ग्यास पुर्‍याइएको थियो ।
पहिलो दिन भएकाले डेलिभरी अलि गाह्रो भएको बखतीको भनाइ छ ।
यसैकारण निगमले दुईवटा रुट बनाएर ग्यास डेलिभरी गर्‍यो ।
पहिलो रुट थियो, कलंकीबाट स्वयम्भु, सामाखुसी हुँदै गौसला–बत्तीसपुतली र टेकुसम्म । दोस्रो थियो, कलंकीबाट बल्खु, सातदोबाटो हुँदै कोटेश्वर–च्यासल र टेकुसम्म ।
बखतीले अनुभव सुनाए, “वनस्थली चोकमा पुगेर ४५ मिनेट पर्खियौं । तर, फोन गर्ने व्यक्तिले ‘आउँदैछु’ मात्र भनिरहनुभयो । त्यसपछि फोन स्विच–अफ गर्नुुभयो ।”
बखतीले आफूलाई २० देखि ३० जना दुःख दिने व्यक्तिले फोन गरेको बताए । उनले भने, “घरैमा ल्याइदिन माग गरे । सक्नेले पनि ३ तल्ला माथिसम्म बोलाए ।”
सक्नेहरुले यसो गर्दा आवश्यकता परेकोलाई सबैलाई ग्यास पुर्‍याउन सम्भव नभएको उनको दाबी छ । बाह्रखरीमार्फत् बखतीले दाबी गरे, “सक्नुहुन्छ भने कृपया चोकसम्म आउनुस् ।”
राईको पनि यस्तै अनुभव छ, “धेरै फोन कल ‘फेक’ जस्ता थिए । धेरैले ठट्टा गरे ।” अधिकांशले ‘निगमले ग्यास दिँदो रहेछ–रहेनछ’ भनेर चेक गरेको बताएको उनले बताए ।
राईले भने, “कतिले ग्यास नसिद्धइ फोन गरेका रहेछन् । कतिले डेलिभरी गर्नेबेला फोन उठाएनन् । कतिले बच्चालाई फोन उठाउन दिए । कतिपय ग्यास बुक गरेर घरबाट काममा हिँडे ।”
उनका अनुसार सयवटा फोनमा १–२ वटामात्र निगमले लक्षित गरेको वर्गबाट आउने गरेको छ । “तर, पीडामा परेकाको त टेलिफोनसम्म पनि पहुँच नहुने रहेछ,” उनले सुनाए ।
मंगलबार ८७ सिलिन्डर बिक्री, बुधबार थप ग्यास माग
निगम प्रवक्ता विनितमणी उपाध्यायका अनुसार मंगलबार ८७ सिलिन्डर ग्यास बिक्री भएको छ । जसमध्ये नेपाल ग्यासको ४१, एसटीसीको २०, सुगम–एभरेष्ट ग्यासको १०, श्री–बाबाको ६ र सगर ग्यासको १० सिलिन्डर बिक्री भएको छ ।
उपाध्यायले भने, “निगमले कलंकीबाट घडीको सुइ घुम्ने दिशामा एउटा र विपरीत दिशामा अर्को मोबाइल भ्यानमा राखेर ग्यास पुर्‍याएको थियो ।”
यसबाहेक निगमको टेकु कार्यालयमा आउनेलाई सोही स्थानबाट र असहायलाई घरैसम्म पुर्‍याइएको दाबी उनले गरे ।
निगमले घुम्ती सेवा र टेकु कार्यालयबाट बेच्नका लागि उल्लेखि कम्पनीका ३ सय ६० सिलिन्डर ग्यास तयार पारेको थियो । जसअनुसार निगमसँग नेपाल ग्यास ८० वटा तथा सुगम–एभरेस्ट ग्यास, एसटीसी, बाबा–श्री र सगर ग्यास ७०–७० को संख्यामा उपलब्ध थियो ।
निगमले बढ्न सक्ने सम्भावित मागलाई मध्यनजर गर्दै नेपाल ग्यासको थप ८०, एसटीसी, लुम्बिनी र सिद्धार्थको ७०–७० तथा मनोज, एचपी र गृहलक्ष्मीको ३५–३५ सिलिन्डर ग्यास मगाइएको छ ।
घुम्ती सेवाबाहेक टेकुमा व्यवस्थापन मिलाइएको भण्डारणको कक्षबाट बिहान १० बजेदेखि साँझ ५ बजेसम्म आएर उपलब्ध कम्पनीको सिलिन्डर किन्न आग्रह गरिएको छ ।
यी नम्बरमा फोन गरेर ग्यास बुक गर्न सकिने
नेपाल आयल निगमले कसैको ग्यास सकिएमा निगमको हटलाइन नम्बर ११४६ तथा घुम्ती सेवाका नम्बरहरु ९८५१२७३४७९,९८५१२७३४३१ र ९८५१२७३२६९ मा र टोल फ्रि नम्बर १६६००११००२८ मा सम्पर्क गरेर ग्यास बुक गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।
कर्मचारीको अग्रसरता, डिलर कमिसन कोरोना कोषमा
निगममा दुईवटा कर्मचारी संघको अग्रसरतामा ग्यासको घुम्ती सेवा सुरु गरिएको हो । नेपाल आयल निगम स्वतन्त्र कर्मचारी युनियन र नेपाल आयल निगम कर्मचारी संघले घुम्ती सेवाको नेतृत्व गरेको छ ।
आवश्यकतामा परेकालाई सेवा दिनु आफ्ना दायित्व ठानेर यो सेवाको सुरुवात गरेका हुन् ।
निगमले घुम्तीमार्फत् ग्यास बेच्दा डिलर कमिसन रकम बच्ने र सो रकम कोरोना भाइरस रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचार कोषमा जम्मा गर्ने जानकारी दिएको छ ।
यसबाहेक कर्मचारी बोनसका लागि छुट्याइएको रकमको केही प्रतिशत कोरोना कोषमा जम्मा गरिदिन निगमको बोर्डलाई आग्रह पनि गरिएको छ ।
लकडाउनको अवधिभरका लागि निगमले आवश्यकतामा परेका उपभोक्तालाई १२ वर्गमा विभाजन गरेर ग्यास बिक्री गरेको छ ।
ती १२ वर्ग हुन्ः अस्पताल, वृद्धाश्रम, बिरामी–असहाय, अनाथालय, फरक क्षमता भएका, किरिया (आशौच) बसेको घर, बालाश्रम–बालगृह, पुनर्उत्थान केन्द्र–सुधारगृह, कारागार, निःशुल्क भोज गराउने निकाय–संस्था वा व्यक्ति, सरकारले तोकेको क्वारेन्टाइन तथा अत्यावश्यक काममा खटिएका मजदुर र कर्मचारी ।
पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह दम्पत्तीलाई विमानस्थलमा यसरी गरियो स्वास्थ्य जाँच (भिडियोसहित)